FAMPAHALALANA SY SARY KELY MOMBA NY ALIKA KELY GOLDENDOODLE DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary kely momba ny alika kely Goldendoodle Dog
Alika mitambatra Retriever / kilalao na alika kely mifangaro Poodle
Bentley the Mini Goldendoodle amin'ny 6 volana milanja 45 pounds
Ny Miniature Goldendoodle dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Golden Retriever ary ny kilalao, kely na kely fenitra Poodle . Ny Miniature Goldendoodles vitsivitsy dia novolena ho lakroa voalohany teo anelanelan'ny Golden Retriever sy Miniature Poodle. Misy ny Toy Goldendoodle ao anatiny. Ireo habe roa amin'ny Goldendoodles kely kokoa dia tratra indraindray amin'ny alàlan'ny insemination fandidiana na insemination artifisialy, fa tsy ny mpiompy rehetra no manao io fomba fiompiana io. Ireo alika kely vokatr'izany dia mety ho kely na tsy kely habe. Ny teôria dia hoe izy ireo dia eo anelanelan'ny haben'ny Miniature Poodle sy ny haben'ny Golden Retriever. Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Anontanio ny mpiompy izay ifandraisanao amin'ny fomba fiompiana nampiasain'izy ireo hamokarana ny Mini Goldendoodle. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Misy fomba vitsivitsy samihafa hamokarana Goldendoodles ny mpiompy.
F1 = 50% Golden Retriever ary 50% Poodle: Ity ny hazofijaliana Golden to Poodle ity dia taranaka voalohany, miteraka zaza salama kokoa. Ny karazana volo dia mety milamina toy ny volondavenona na milomano / shaggy na tsindraindray toa wolfhound Irlandy (fa amin'ny fahatsapana malefaka kokoa) dia afaka mandatsaka na tsy mandatsaka pups amin'ny fako mitovy izy ireo.
F1-B = 25% Golden Retriever ary 75% Poodle (F1 Goldendoodle sy Poodle hazo fijaliana): Ity dia Goldendoodle namboarina niverina tany Poodle.
F2 = F1 Goldendoodle sy F1 Goldendoodle hazo fijaliana: Amin'ity fiarahana ity dia mahazo ny isan-jato mitovy amin'ny fifangaroan'ny Golden Poodle ianao tahaka ny F1 Goldendoodle.
F3 = hazo fijaliana F2 Goldendoodle sy F2 Goldendoodle.
Taranaka maro = F3 na Goldendoodle andiany avo kokoa ary hazo fijaliana Goldendoodle.
GANA = Fikambanan'ny Goldendoodle any Amerika Avaratra
TGR = Registra Goldendoodle
Fampahalalana Goldendoodle mahazatra
Otis the F1 Mini Goldendoodle— 'Ity i Otis tamin'ny oram-panala voalohany (tiany io!). 9,5 volana izy ary milanja 36 pounds amin'ity sary ity. Mbola tsy voakarakara ara-pahaizana izy, fa ny palitaony marefo kosa dia ambany fikojakojana (ary heverinay fa mahafatifaty tokoa ...). ' Sary natolotry ny Dreamdoodles
Otis the F1 Mini Goldendoodle amin'ny faha-9 volana, sary natolotr'i Dreamdoodles
Otis the F1 Mini Goldendoodle amin'ny 5 volana— 'Ny reniny dia Golden Retriever ary ny rainy dia apricot Poodle kely. Alika mahafinaritra izy, be fitiavana sy mahay ary mora nampiofana. Otis dia sariaka be amin'ny olona sy ny alika azony atao amin'ny alàlan'ny fomba tsara. Ary tsy milatsaka izy! Heverinay fa 35-40 pounds eo ho eo no hiafarany rehefa lehibe tanteraka izy. ' Sary avy amin'ny Dreamdoodles
Otis the F1 Mini Goldendoodle amin'ny 5 volana (Golden Retriever reny / Miniature apricot Poodle ray), sary natolotry ny Dreamdoodles
Norfolk terrier Jack Russell Mix
Otis the F1 Mini Goldendoodle puppy amin'ny 10 herinandro (Golden Retriever reny / Miniature apricot Poodle ray), sary natolotr'i Dreamdoodles
'Ity no zanako Maggie May afaka 8 herinandro eo ho eo. Miniature Goldendoodle F1 izy. I Dada dia Mini Poodle ary ny reny dia a Golden Retriever . Manana sofina hafahafa izy. Tsy mba nitombo tsara ny sofiny ankavia, fa afaka mandre izany tanteraka izy. Tsy dia lava loatra ny misidina tampoka toy ny hataon'ny sofiny ankavanana. '
Ity i Maverick, ilay Mini Goldendoodle natory teo am-pandriana fandriany.
Sully ilay alika kely Mini Goldendoodle amin'ny 2½ volana, milanja 10 pounds
Alika kely Mini Goldendoodle 8 herinandro, sary natolotr'i Ayers Pampered Pets
volamena retriever springer spaniel afangaro alika kely hamidy
ny rambon'ny alika dia mivonto amin'ny fotony
alika kely voromahery maranitra amidy